Nidaamka kaydinta tamarta qaboojinta Alaabta iyo Warshada - Shiinaha Nidaamka kaydinta tamarta qaboojinta Warshadaha
BlackShields EC taxane qaboojiyaha sare ee lagu rakibay waxaa loo qaabeeyey sidii xalka xakamaynta cimilada ee nidaamka kaydinta tamarta baytari (BESS). Iyadoo la tixgelinayo codsiga xakamaynta kulaylka ee batteriga iyo qaab dhismeedka weelka tamarta tamarta, qaboojiyaha waxaa loogu talagalay sida xalalka xakamaynta cimilada ee la isku halleyn karo oo hufan oo leh qaab dhismeed sare oo lagu dhejiyay, qulqulka hawo weyn iyo sahayda hawada ee dusha sare ee weelka.
Qaybta qaboojinta dareeraha taxanaha ee BlackShields MC waa qaboojiyaha biyaha kaas oo loogu talagalay in lagu xakameeyo cimilada nidaamka kaydinta tamarta batteriga. Naqshad mono-block ah, qaab-dhismeedka is haysta, meel sare, meel u dhow isha kulaylka, mugga kulaylka sare ee gaarka ah, qaylada hoose iyo jawaab-celinta degdega ah, unugga qaboojinta dareeraha waxay noqon kartaa mid aad u sarreeya oo lagu kalsoonaan karo qaboojinta BESS
BlackShields EC taxane monoblock hawo qaboojiyaha waxaa loo qaabeeyey sidii xalka xakamaynta cimilada ee nidaamka kaydinta tamarta. Iyadoo la tixgelinayo codsiga xakamaynta kulaylka ee batteriga iyo qaab dhismeedka weelka tamarta tamarta, qaboojiyaha waxaa loogu talagalay sida xalalka xakamaynta cimilada ee la isku halleyn karo oo hufan oo leh qaab-dhismeedka monoblock, socodka hawada weyn iyo sahayda hawada sare.